With the present International norms, Anawrattha and Kyansittha would be found guilty for FORCED LABOUR, CHILD LABOUR, RECRUITMENT OF CHILD SOLDIERS, Kangaroo court unfairly punishing the under-aged youths | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeWith the present International norms, Anawrattha and Kyansittha would be found guilty for FORCED LABOUR, CHILD LABOUR, RECRUITMENT OF CHILD SOLDIERS, Kangaroo court unfairly punishing the under-aged youths
With the present International norms, Anawrattha and Kyansittha would be found guilty for FORCED LABOUR, CHILD LABOUR, RECRUITMENT OF CHILD SOLDIERS, Kangaroo court unfairly punishing the under-aged youths
August 15, 2017 August 15, 2017 drkokogyi
-Not an အိုင်ဒီယာ အသစ်…..မိုက်တယ်ဗျ…..
I have wrote in LAST TEN YEARS in Wikipedia articles and TALK PAGES (used for discussing and arguing about the article like that) my Dr San Oo Aung and Dr Ko Ko Gyi blocks for few times with that idea of Anawratha and Kyansittha using:
RECRUITMENT OF CHILD SOLDIERS,
Kangaroo court unfairly punishing the under-aged youths.
And they are NOT ROHINGYAS at all. Numerous Rohingyas are using all the atrocities around the world Muslims and ALL the other No-Rohingya Muslims of Myanmar as if they, the Rohingyas are victims. Too much lies and FAKE NEWS and FAKE PHOTOS…
Not all of the Rohingyas are guilty but there are GOOD and RELIABLE genuine news and photos by Ro Nay San Lwin, U Ba Sein, Maung Zarni, Kyaw Win and others.
Aung Naing Moe updated his status.
မင်းကြီး၊ မင်းလေး ဆိုပြီး အခုအခါ နတ်အနေနဲ့ ကိုးကွယ်ခံနေကြတဲ့ ရွှေဖျဉ်းညီနောင်ဟာ မြန်မာရာဇဝင်မှာ အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရဲရဲတောက် ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျနော်ကောက်ချက်ဆွဲမိတယ်။ :3
စဉ်းစားကြည့်လေ။ ဘုရင်အနော်ရထာ လက်ထက်ကဆိုတော့ သက်ဦးဆံပိုင် ပဒေသရာဇ်ခေတ်။ အနော်ရထာ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထစ်ကနဲဆို သတ်ပစ်တတ်တဲ့ လက်ယဉ်တဲ့ ဘုရင်မျိုး။ ဒီဘုရင်က တောင်ပြုံးမှာ ဆုတောင်းပြည့်စေတီတည်တော့ သူ့နောက်လိုက်တွေကို တယောက်ကို အုတ်တချပ်စီ ပါဝင်ရမယ်လို့ အမိန့်ပေးတယ်။ ဒါကို ရွှေဖျဉ်းညီနောင်က ပျက်ကွက်ပြီး မထီမဲ့မြင်နဲ့ အရက်သောက်စား ပျော်ပါးနေကြတယ်ဆိုတာ နည်းတဲ့ သတ္တိလား။ နည်းတဲ့ အာဏာဖီဆန်မှုလား။
အုတ်တချပ်စီ ပါဝင်ရမယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ သိပ်မပင်ပန်းလှတဲ့ တာဝန်ပါ။ ဒါကို ပျက်ကွက်တယ်ဆိုတာ နမော်နမဲ့ နိုင်လို့တော့ မဖြစ်နိုင်။ တမင်သက်သက် အာခံခြင်းသာ ဖြစ်ရမယ်။
ဘာကြောင့် အာခံရသလဲ။ မီးခိုးကြွက်လျှောက် စဉ်းစားရရင် ရွှေဖျဉ်းတို့ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးက ပုဂံသူရဲကောင်း ဗျတ္တနဲ့ မယ်ဝဏ္ဏ ဖြစ်တယ်။ ဗျတ်ဝိ နဲ့ ဗျတ္တ က ပင်လယ်ထဲ သင်္ဘောပျက်ပြီး မျောလာတဲ့ ညီနောင်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေတောင် ဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ မင်းကြီး မင်းလေး ကိုးကွယ်သူတွေ ဝက်သားရှောင်ကြတယ်လေ။ :3
ဒီတော့ ဖြစ်နိုင်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားစေတီ တည်ရာမှာ သူတို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာနဲ့ မကိုက်ညီလို့ တမင် လက်ရှောင်နေတာ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါကို ဘုရင့်အနားမှာ ကပ်မြှောင်နေတဲ့ ပုဂံခေတ်ဝီရသူတို့က သတင်းပေး ဂျောက်ချလိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မရွှေဥကို မုဒိန်းကျင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကလည်း ပုဂံခေတ် မဘသ တွေရဲ့ ထွင်လုံး ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ဘုရင်မြှောက်စားခံရတဲ့ သူရဲကောင်းညီနောင်အတွက် မိန်းမ အဲ့သလောက် ရှားမယ် မထင်ပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုအခါ တောင်ပြုံးမှာ နတ်အဖြစ်နဲ့ အကိုးကွယ်ခံနေရတဲ့ နတ်အချို့ဟာ ရှင်ဘုရင်ကို အာခံတာကြောင့် အသတ်ခံကြရတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားနတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးတို့၊ အောင်ကျော်တို့၊ ဆရာစံတို့ကို အခုလူတွေ ဦးညွတ်သလို ရှေးတုန်းက ပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ခေတ်က အသတ်ခံရတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားတွေကို အလေးအမြတ်ပြုကြရင်းကနေ ကာလရွေ့လျောပြီး နတ်ရာဇဝင် အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲသလို နတ်တွေထဲမှာ ကတိမတည်တဲ့ ဘုရင်ကို ထွီ ကနဲလုပ်လို့ အသတ်ခံရတဲ့ အမတ်ငအောင်စွာကို အထူးတလည် လေးစားမိပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့လည်း ကတိမတည်တဲ့ ဒေါ်စုအစိုးရကို ငအောင်စွာထုံး နှလုံးမူပြီး ထွီ ကြပါစို့။
Aung Naing Moe replied>>> I want to clarify about my post. Unlike Wai Wai Nu I didn’t claim the Meikhtila Muslim victims as Muslim. I understand it was against Myanmar.
But in this post, I refered to ဗျတ်​ဝိ and ဗျတ္တ not only as muslims but also as Rohingyas. I wrote this not asahistorian. I have no factual back ups. Even I am not sure this whole story isaheresay legend or real story. But accrording to the legend, ဗျတ်​ဝိ and ဗျတ္တ were drifted to the shore after shipwreck. So I assume they came by sea. Another thing is that those worshippers of Shwe Phyinn brothers avoid eating porks. So I assume they might be Muslims too.
Since the newspaper mentions the Rohingyas as boat people(refugees) and some refugees claim that their ancestors came to Arakan by sea, I JOKINGLY suggested that they might be Rohingyas. It was notaserious assertion at all.
You might probably realize about the general animosity of Burmese Buddhists towards the Rohingyas as the hatred was nurtured by the Junta for decades. You will notice that these Burmese Buddishts are at the same time the worshippers of Shwe Phyin Brothers. Don’t you see the irony that they are the anti-muslim and the muslim-nat-worshippers?
The purpose of this post is to ridicule their racist mindsets and also the actrocities committed by the kings they regards as great kings.
Even though I haven’t read your writings in wiki, I appreciate your efforts. I just based my post on the well known legend I have read and heard.
I hope this explanation will clear your misunderstanding about my post.
Ko Ko Gyi @ Aung Naing Moe Salaam…TQ. Now I know that you have the same thoughts and ideas like me. Welcome aboard my friend. TQ again for caring to reply. Congratulations for able to write in Eng and Burmese as I could not write properly (spelling and typing problem.)
Even the great and famous Rohingya lady Wai Wai Nu had used the Meiktila Myanmar Muslim Atrocities as Rohingya’s suffering at Geneva conference. When Maung Maung and I pointed out only she apoligized as if she was nervous and forgot to mention although she had written in the script . We accepted her apology but we heard that our dear friend Ro Dr UTA’s son-in-law Tony and wife, working in UNHCR Malaysia were furiously angry claiming that we were attacking Wai Wai Nu
This is the example I wrote in Wiki (I wrote with few thousand references or citations, book, author, page etc. Some are removed esp like the above opinions of mine but still standing tall….The royal raft could not move after that, may be the silent protest against the killing by the friends who were not happy with the execution. The royal sailors at that time were mostly known to be Muslims. The witty, white and black Indian Brahmans, royal consultants interpreted that, the two brothers were loyal faithful servants but unjustly punished, became Nat (spirit) and they pulled the rudder of the royal boat to show their displeasure. Then only, Anawratha ordered the building of the spirit-palace at Taung Byone and ordered the people to worship the two brothers. This was the clever Royal trick used to be played by the Burmese kings to execute the powerful rivals and posthumously elevated them to the level of Nats or powerful Spirits or local gods, just to please their followers or the people who love the executed heroes.
@ Islam in Myanmar
← လေးကြိမ်မြောက် မြန်မာမွတ်စလင်မ် ဂျီနိုဆိုက် ညီလာခံ အား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှု အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာနိုင်ငံအဖြစ် အမေရိကန်သတ်မှတ် →
One thought on “With the present International norms, Anawrattha and Kyansittha would be found guilty for FORCED LABOUR, CHILD LABOUR, RECRUITMENT OF CHILD SOLDIERS, Kangaroo court unfairly punishing the under-aged youths”
Tin Aung Moe မတရား တဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ. .ဆိုတာ ရွှေဖျဉ်းညီနောင်က စ ခဲ့တာ ပေါ့နော် 😉